इटालीमा स्याङ्जाका २९ वर्षीय शोभितको मृत्यु ! - Gandak News
इटालीमा स्याङ्जाका २९ वर्षीय शोभितको मृत्यु !
गण्डकन्यूज द्वारा ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार २१:०५ मा प्रकाशित
पोखरा । स्याङ्जा स्थायी घर भएका २९ वर्षीय शोभितबहादुर बिश्वकर्माको उपाचारको क्रममा इटालीमा मृत्यु भएको स्विट्जरल्याण्ड स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । रोजगारीको लागि डेढ बर्ष अघि इटाली पुगेका बिश्वकर्माको शुक्रबार उपचारको क्रममा अस्पतालमै निधन भएको हो ।
लगातार बान्ताको समस्या देखिएपछि अस्पताल पुगेका उनको उपाचारको क्रममा क्यान्सर लागेको पत्ता लागेको थियो। हाल दक्षिण इटालीको फोज्जिया प्रान्तमा बस्दै आएका उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको भनिएको छ ।
अस्पतालमा उपाचारार्थ बिश्वकर्माकी श्रीमतीलाई ईटाली ल्याउन नेपाली अवैतानिक बाणिज्यदूत पाउलो नुगारीमार्फत पहल थालिएको थियो । तर, श्रीमती इटाली आउनु अगावै बिश्वकर्माको मृत्यु भएको छ। उनकी ६ वर्षकी एक छोरीसमेत एनआरएन इटालीका महासचिव छबिलाल कडेलले जानकारी दिए।
स्विट्जरल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृतकको शव नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। शदगत नेपालमै गर्ने परिवारले इच्छा ब्यक्त गरेपछि शव नेपाल पठाउने प्रक्रिया थालिएको दूतावासले जनाएको छ ।
गायक राजेश पायल राईको घरमा आगलागी, अवार्ड र प्रमाणपत्र जले,…
बाग्लुङ मल्मका थापाको जापानमा मृत्यु
सहारा क्लव पोखराको अध्यक्षमा पुनः थापा, सहारा एकेडेमीलाई…
पर्यटक बोकेर काठमाडौं आउदै गरेको ७ वटा हेलिकप्टर काभ्रे र…
अघिल्लो	अर्को 1 of 1,538
कास्की २ को उपनिर्वाचनमा रविन्द्र पत्नी विद्या भट्टराई उठ्ने…
पोखराबाट काठमाडौं जाँदै गरेको माइक्रोबस तनहुँमा जिपसँग…
मुक्तिनाथ जाँदै गरेको भारतीय बस तनहुँको कमलबारीमा दुर्घटना :…
पोखरामा ठेकेदार कार्की चिनेजानेकै ४ जनाबाट अपहरित,…
गैँडाकोटमा एक्ली बृद्धाको हत्या गरी लुटपाट, तीन…
पोखरा केआईसिंह पुल पार्कमा भारतीय पर्यटक एक्कासी…
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल कास्की सभापति भेट्न…
अस्मिताको बयानः ‘दुर्घटनामा मरेका…